Etu esi mepụta Vidiyo TikTok Pụrụ Iche - LucidPix
Esi Mepụta Vidiyo Pụrụ Iche TikTok
Soro anyị na TikTok @LucidPix
Ọ bụrụ na ịnụtabeghị, TikTok abụrụla ihe mgbasa ozi ọhaneze kachasị ọhụrụ nke afọ 2020. E mepụtara ngwa a ka ọ bụrụ vidiyo vidiyo nke mmadụ 15 ruo 60 nke ndị mmadụ na-egwu egwu na egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ, ọ dịla ugbu a gbasaa n'ime ọtụtụ ọdịnaya ndị ọzọ sitere na eme kọfị pịa ka a Onye ọrụ Starbucks na-akọ akụkọ mmekọrịta ndị 'ọkacha mmasị' ndị ahịa ha. Maka post blog a, anyị ga - enye gị mmụọ maka vidiyo TikTok ọzọ ma gosi gị otu anyị siri mee ya.
Iji LucidPix maka TikTok
Videome vidiyo TikTok kachasị mma chọrọ ịgbakwunye ihe pụrụ iche na ike elebeghị nke ahụ. Yabụ, ụzọ kachasị dị mma iji mee ka ọdịnaya gị pụọ iche bụ iwebata ngwa ndị dị na mpụga na ntinye vidiyo gị. Otu ụzọ isi mee nke a bụ iji ngwa ngbanwe 3D Photo, LucidPix. Site na ịtụgharị foto gị site na 2D ka onyonyo na-agagharị na vidiyo 3D ma ọ bụ GIF, post gị na-ekwe nkwa ọpụpụ na-egosi na foto 3D amalitebeghị na TikTok. Na nkenke, nzipu ozi gị ga-apụ n’ihi na ọ bụ ihe pụrụ iche Nke a bụ otu esi eme 3D Photo na LucidPix.
Họrọ Isiokwu na-agbanwe agbanwe
N’ime usoro ịtụgharị uche, ị ga - akari ike iche echiche ọhụụ mgbe enwegorịrị nnukwu ihe n’elu ikpo okwu. Yabụ, anyị na-atụ aro ilele isiokwu na - agbanwe agbanwe ma na - agbanwe ya ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche na gị. Nke a nwere ike ịbụ site na iji vidiyo esi nri na ihe onyonyo 3D site na iji LucidPix ma ọ bụ imepụta ihe 3D ahaziri iji tinye na vidiyo TikTok gị.
Triednwalela usoro #mirrorselfie si #tiktok? Lee @leoniehanne na-eme ya na 3D na #LucidPix
A post na-akọrọ site LucidPix - 3D Photo App (@ lucidpix3d) na Apr 29, 2020 na 6: 16pm PDT
Ihe Nlereanya Anyị:
N'ebe a, anyị weere usoro nke igosipụta ihe omume njem gị na kama iji vidiyo ndị pụtara ìhè, anyị jiri LucidPix iji gbanwee ihe onyonyo anyị na vidiyo 3D, na-eme ka post ahụ dị iche na ihe ọ bụla ọzọ n'elu ikpo okwu!
Ebee ka ịchọrọ njem mgbe a kpọpụsịrị iche? #lucidpix # 3d # 3dphoto # 3dp Photography # 3dphotos #meme #tiktoktravel #plane #wanderlust #ndebe iche
Apart Oge dịpụrụ adịpụ - ODESZA
Nke ikpeazu, thezọ kachasị mma iji mee vidio TikTok bụ ịnwe ọ funụ! Ma nke a bụ naanị gị, gị na ndị enyi gị ma ọ bụ ndị ezinaụlọ gị, vidiyo TikTok kachasị mma bụ ndị ọ na-enwekarị obi ụtọ ịme. Ọ bụrụ na nke a anaghị arụ ọrụ maka gị wee nwaa ihe ọhụụ, ị nwere ike ịpịgharịa TikTok ịchọta egwu na-esite na ndị mbido ruo n'ọkwa ọkachamara Charli D'Amelio choreography. Onye obula I nweta mmuo gi, jiri ya ma mee ya nke gi!
Etu esi Ese 3D foto na Ederede →← Arụrụ redlọ? Lee ihe ise ị ga-eme n’oge iche
Etu esi ebipụta akụkọ Instagram na 3D
Atụmatụ Esere Ese Agbaghara Nke Etiti
Ndị na-emepụta ihe kacha mma 5 GIF
Oge kachasi mma nke akụkọ ihe mere eme Olympic na 3D